Koofiyadaha → Dharka shaqada • farshaxanimada kumbuyuutarka ee P&M
Abwaanno shaqadu waa shey loogu talagalay waxqabadyada ka jira warshado kala duwan. Waxaa loo isticmaalaa in dharka looga ilaaliyo wasakhda ama dhaawacyada. Qaddarkoodu waa mid caalami ah, laakiin waxaa lagu hagaajin karaa xargaha.
Waxyaabaha dib loo isticmaali karo ka sokow, waxaan sidoo kale leenahay dufanno la tuuri karo oo ka kooban 10 ama 100 gogo ', gaar ahaan loo isticmaalo gastronomy. Dukaanka waxaad ka heli doontaa moodello ka sameysan noocyo kala duwan oo qalab ah sida suuf culus, polyester, caag, polypropylene iyo kuwa kale, iyadoo ku xiran hadba halka loo socdo.
Waxyaabaha la isticmaalay waa kuwo tayo sare leh waxayna leeyihiin sifooyin dheeri ah marka loo eego khaanadaha khaaska ah. Qeyb weyn oo ka mid ah waxaa laga sameeyay waxyaabo si fudud loo dhaqi karo. Waxaan bixinnaa, kuwo kale, qurxinta, cuntada iyo kawaanka.
Waxaan sidoo kale ku siinnaa macawisyo qaybta dharka shaqada leh macawiso carruurta loogu talagalay dhalinyarada jecel tijaabooyinka cuntada.
Bixinta buskudka shaqada waxaa ka mid ah:
gastronomy iyo HBS,
ka samaysan polypropylene / PE / PVC / Tyvek,
Gastronomy iyo HBS
Kuwa ugu caansan dalabku waa dufan ilaalin ah u heellan waaxda cuntada iyo qurxinta. Waxaan sidoo kale bixinnaa waxa loogu yeero macawis - macawiso gaagaaban. Dharka ayaa ka sameysan suuf iyo isku dar ah cudbi iyo walxaha macmalka ah, taas oo u oggolaaneysa in si fudud looga qaado wasakhda cuntada ama waxyaabaha la isku qurxiyo, iyo kuwo kale. Midabada dharka loo isticmaalay macawisyada waxay ku darayaan dhameystir hagaagsan.
Warshadahaan, sharraxaadda iyo muuqaalka ayaa si gaar ah muhiim u ah maxaa yeelay shaqaaluhu waxay xiriir badan la leeyihiin macaamiisha - alaabtayada waxay ka dhigeysaa inay dareemaan xirfad iyo qurux. Ikhtiyaar dheeraad ah daabacaad astaanta ayaa kuu oggolaan doonta inaad ka soo baxdo tartanka oo aad si fiican ugu dhejiso xusuusta qofka qaata.
Qalab khaas ah oo ka hortag ah
Koofiyadaha birta oo tayo sare leh ka-goyn waxaa loogu talagalay badanaa warshadaha cuntada. Waxay ka mid yihiin qalabka shaqaale qabta shaqo la xiriirta howlgalka mindi loo jiheeyay dhanka jirka. Koofiyaduhu waxay ka samaysan yihiin bir bir ah oo tayo sare leh iyo nidaam giraan bir ah oo dhexroorkiisu yahay 7 mm, oo buuxinaya shuruudaha EN13998 (heerka 2). Jaangooyuhu wuxuu oggol yahay isticmaalka xaaladaha daryeelka gaarka ah. Adkaysiga sare ee maadadani waxay ka dhigeysaa wax aan macquul aheyn in jirka la dalooliyo.
Koofiyadaha ayaa ku habboon ka shaqeynta nidaamka HACCP. Waxaa loo isticmaali karaa in lagu farsameeyo caagagga iyo maqaarka, iyo sidoo kale kala soocidda hilibka lafaha. Soo-saaraha ayaa hubiyay in khafiifinta, in kasta oo ay ka kooban tahay, ay ahayd sida ugu fudud ee suurtogalka ah oo aan xaddidayn xorriyadda dhaqdhaqaaqa.
Koofiyadaha laga sameeyo polypropylene, PE, PVC iyo tyvek waxaa loogu talagalay xaaladaha halka ay jiraan maaddooyin dhaawici kara dharka iyo maqaarka ka dhasha taabashada waxyaabaha sida kiimikada ama walxaha ololi kara. Waxaan bixinaa macawino sheybaarro ka sameysan polypropylene oo leh koolaar si loo ilaaliyo qoorta, iyo sidoo kale moodello ka sameysan microporous PE laminate loogu talagalay ilaalinta marka lala shaqeynayo walxaha waxyeelada leh.
Ka mid ah macawisyada difaaca, waxaa sidoo kale ku jira macawis PVC ah, oo ugu habboon ka shaqeynta dukaanka hilibka si loo farsameeyo hilibka aan u baahnayn mindi ku sii jeedda jirka. Cidhiidhiga ka ilaaliya dharka ayaa lagu hubiyaa maaddada cirridka.
Waxaan bixinnaa dufanno shaqeeya shirkadaha sumcadda leh Leber & Hollman iyo Reis. Moodooyinka aan ku hayno iibka waxaa lagu heli karaa gacmo dhaadheer iyo kuwo gaagaaban. Koofiyadaha ka kooban isku-darka dharka polyester-ka iyo suufka culus ayaa lagula talinayaa inay ka shaqeeyaan jikada, halkaas oo dharka ay ka muuqato wasakh culus oo joogto ah, taas oo iyana u baahan in si joogto ah loogu dhaqo heerkulka sare, xitaa ilaa 95 darajo Celsius, iyadoo la ilaalinayo qurxinta dharka.
Marka laga reebo jikada, macawisyadu waa ku habboon yihiin inay ka shaqeeyaan bakhaar, wax soo saar, isku imaatin ama shaybaarro. Naqshadeynta casriga ahi waxay u oggolaaneysaa muuqaal soo jiidasho leh, faahfaahinta saxda ahna waxay caddeyn doontaa waxtar u leh isticmaalka muddo dheer.
daanyeero ka shaqeeya allegromacawis cadduugga shaqada haweenkashaqeysiiso duubabkadukaanno shaqo Allegrodawaar shaqo suufduugga shaqada haweenkau adeegso jaakadaha haweenka Allegrou shaqee darootada nadiifiyeyaashashaqo macawis macieju adeegso dufanno ragga ahshaqo macawiso ragga allegroshaqeeya soosaarayaashaDufaneyaasha shaqada ee casriga ahduugga shaqeeya wrocławdharka shaqada khaanadaha haweenka